‘अब पछाडि फर्कनु भनेको कांग्रेस मास्ने कुरा हो’ – email khabar | Latest news of Nepal
प्रकाशित : २०७२ चैत १६ गते ७:३८
्–नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा खुलातर्फ विजयी एक मात्र नेतृ सुजाता कोइराला आफ्ना पिता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको ०६२र६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्ने तर्क गर्छिन् । कांग्रेस पछि फर्कन नहुने र नयाँ कोर्सको अगुवा हुनुपर्ने धारणा राख्ने सुजातासँग गरिएको कुराकानीः
महाधिवेशन सकियो । कस्तो लाग्यो ?
महाधिवेशनमा पैसाको खेल भयो । गाउँ–गाउँसम्म पैसा पुग्यो । समस्या के भने क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा नै पैसाको खेल सुरु भइसकेको थियो । क्रियाशील सदस्यता र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने मापदण्ड पहिलेभन्दा अहिले सजिलो बनाइयो । हाम्रो पार्टीले क्रियाशील सदस्यताबारे पनि विधान संशोधन गरेर पुनस्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । पार्टीको चुनावमा पैसाको खेल र तडकभडक हुनु दुःखद कुरा हो ।
पैसाको कुरा एक ठाउँमा होला तर परिणामका आधारमा हेर्ने हो भने कोइराला परिवारले अघि सारेका रामचन्द्र पौडेललाई तपाईंहरूले जिताउन सक्नुभएन । किन ?
अरूको विषयमा त म भन्न सक्दिनँ । अरू ‘फ्याक्टर’हरू पनि होलान् । मैले रामचन्द्रजीको पक्षमा लबिङ गरेको हो । अर्को कुरा, उहाँ आफ्नै त्रुटिका कारण पनि हार्नु भो । उहाँले जिल्लाजिल्लामा संस्थापनकै बलिया मान्छेलाई हटाएर आफ्ना मान्छे अघि सारेर गुट बनाउने काम गर्नुभयो । त्यसैले संस्थापनकै धेरै मान्छे पौडेलजीसँग रिसाए, भोट दिएनन् ।
कोइराला परिवारका सदस्य, खास गरी शशांक र सुजाताले रामचन्द्रलाई भोट मागेनन् पनि भन्छन् । यो त घात गरेजस्तो कुरा भयो नि ?
मैले सपोर्ट गरेको हो । तर, चुनावमा केही त्रुटि भएका छन् । तयारी पनि पुगेन होला । दोस्रो चरणको चुनावमा मैले र महेश आचार्यजीले रामचन्द्रजीलाई एउटा कोठामा राखेर भनेका हौँ, ‘यो भएन, तपाईंले सबै मान्छेलाई एक्स्पोज गराउनूस् । सबैलाई लिएर मत माग्न हिँड्नूस् ।’ हामीले दबाब दिएपछि रामचन्द्रजीले त्यो प्रयास पनि गर्नुभयो तर ढिला भइसकेको थियो ।
कांग्रेसकै नेतृत्वमा ०६२र६३ को आन्दोलन भयो र देश गणतान्त्रिक भयो, धर्मनिरपेक्ष भयो र संघीयतामा जाने टुंगो लाग्यो । नयाँ संविधान आएको छ । तर, केही नेताहरू उपलब्धिलाई पुनस्विचार गर्ने कुरा गर्दै छन् । कांग्रेसभित्र के खिचडी पाक्दैछ ?
कसले के विचारले के के कुरा गरिरहेका छन्, त्यो मलाई थाहा छैन तर जनताले आन्दोलनबाट ल्याएका कुनै पनि उपलब्धिहरूमा पुनस्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठीक होइन । जनताले ल्याएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षको कुरा गुमाउने भन्नु त कांग्रेस मास्ने कुरा हो ।
अर्को कुरा, संविधान बनेको छ । यसका पछाडि धेरै मिहिनेत परेको छ । हिजो राजा र माओवादीका हातमा बन्दुक थियो, त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायो । आन्दोलनको भावनालाई समेटेर अगाडि आयो । जनजाति, मधेसी, दलित र महिला सबैको संविधान पनि बन्यो । यसमा केही त्रुटि छन् भने संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, आन्दोलनले ल्याएको उपलब्धिबाट ‘ब्याक’ हुन सकिँदैन ।
शशांक कोइरालाले त सार्वजनिक रूपमै उपलब्धिहरूबारे पुनस्विचारको कुरा उठाउनु भो त ?
उहाँले भनेर हुन्छ ? कांग्रेसको केन्द्रीय समितिका कुन सदस्यले मान्छन् त्यस्तो कुरा ? शशांकजीले के सोचेर त्यस्तो बोल्नुभयो ? मेरो भेट भएको छैन । कुरा हुन पनि पाएको छैन । तर, अब राजतन्त्र फर्कन असम्भव छ । देश गणतन्त्र र संघीयतामै रहन्छ । गणतन्त्र र संघीयताबाट बाहिर आउने कुरा गर्नु देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्नु हो ।
भनेपछि पछि हट्ने कुरा प्रतिगामी हो ?
माओवादीले बन्दुक बुझाइनसकेका बेला र तराईमा आन्दोलन चर्किरहेका बेला हातमा केही नभएको कांग्रेस चुनावमा गएको हो । त्यतिबेला कांग्रेसले चुनाव हार्छ भन्दा गिरिजाबाबुले मसँगै भन्नुभएको थियो, हामी हारेर केही फरक पर्दैन, देशले हार्नु भएन । हो नि, माओवादीजस्तो शक्तिलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर संसदीय परिपाटीमा ल्याउनु कांग्रेसको ठूलो उपलब्धि हो । त्यसैले देश हार्ने कुरा गर्नु राम्रो होइन । अस्थिरता पैदा गर्ने कुरा राम्रो होइन । जसले उपलब्धिलाई मास्ने कुरा गर्छ, ऊ आफैँ मासिन्छ ।
पछिल्लो महाधिवेशनपछि त कोइराला परिवारको अबको नेता या उत्तराधिकारी त शशांक कोइराला बन्नेजस्तो देखियो नि लिगेसीको यो दौडमा तपाईं आफू कहाँनेर पछि पर्नुभयो ?
लिगेसी भनेको विचारको कुरा हो । कसैले म कसैको उत्तराधिकारी हुँ भनेर हुने पनि होइन । जहाँसम्म मेरो कुरा छ, यही महाधिवेशनमा मविरुद्ध धेरै षड्यन्त्र भएका थिए । म एक्लै लडेर खुलामा २५ भित्र पर्न सफल भएँ । र, लिडरसिप भनेको यही परिवारको भन्ने पनि हुँदैन । बीपीको छोरा भएर प्रकाश कोइरालाजी आज कहाँ हुनुहुन्छ रु प्रकाशजी पनि पपुलर मान्छे हो नि १ उहाँले बीपीको विचार अगाडि बढाउन सक्नुभएन । गलत बाटो लिनुभयो, त्यसैले अहिले कांग्रेसभित्र उहाँको स्थान छैन । अब शशांकजीको पनि परीक्षाको समय हो । उहाँले सही बाटो लिनुभयो भने हामी सबैको सहयोग हुन्छ, लिनुभएन भने उहाँलाई नै गाह्रो पर्छ ।
एकथरीको अनुमान के छ भने अब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान संशोधन गराएर कोइराला परिवारको एउटा हिस्सालाई आफ् नो ताकत बनाउनुहुन्छ । खास गरी तपाईंलाई उपसभापति बनाउन सक्नुहुन्छ । यस्तो कुनै संकेत मिलेको छ ?
देउवाजीसँग त्यस्तो कुनै कुरा हुन पाएको छैन । तर, म सभापतिमै उठ्न खोजेको मान्छे हो, उम्मेदवारी नै घोषणा गरेको मान्छे हो तर परिस्थिति अलिक फरक बन्दै गएकाले हामीले रामचन्द्रजीलाई अगाडि सारेका थियौँ । त्यसैले मलाई उपसभापति बनाउने कुरा नौलो भने होइन । म उपसभापति हुन योग्य हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । मलाई विश्वास छ, सभापति देउवाले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ ।
तपाईंको राजनीतिक स्पेश सिर्जना गर्ने हिजो गिरिजाबाबु र त्यसपछि सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो । अहिले कोही छैनन्, त्यसैले कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र एक्लो महसुस हुँदैन ?
सुशीलदाले त मलाई खास त्यस्तो के गर्नुभयो र ? खोइ केही सहयोग गरेजस्तो लाग्दैन । तर पनि, उहाँ हुँदा भरोसा भएजस्तो लाग्थ्यो । अभिभावक हुनुहुन्थ्यो । म पनि मान्छे नै हुँ, कहिलेकाहीँ एक्लो महसुस हुन्छ । तर, राजनीतिक रूपमा कार्यकर्ताले मलाई माया गरेका छन् भन्ने अनुभव हुँदा भने त्यस्तो एक्लो फिल हुँदैन ।
तपाईंले अनेकथरी कार्यकर्तासँग संगत गर्नुपर्छ । नेता हुनुको अनुभूति कस्तो रह्यो ?
जब तपाईंले गरेका राम्रा कामको, मिहिनेतको कदर हुँदैन । अवमूल्यन हुन्छ । तपार्इंलाई अपमान र अविश्वास हुन्छ, षड्यन्त्र र घात हुन्छ, त्यतिबेला नेता हुनुमा बहुत दुस्ख अनुभव हुन्छ । यसपटकको महाधिवेशनमै मलाई त्यस्तो भयो । मैले जिल्लाजिल्ला घुमेर त्यत्रा साथीहरू भेटे, बेक्कार भेटेँ भन्ने पनि लाग्यो । यहाँ त दुस्खै नगरेका मान्छेहरूलाई सेट गरिँदो रहेछ । पार्टीभित्र एउटा यस्तो ग्रुप छ, जसले विवेकले निर्णय गर्दैन, जहाँ भन्यो त्यहाँ मत हाल्छ । पार्टीभित्र उठ् भन्दा उठ्ने, बस् भन्दा बस्ने भनेर मान्ने समूह तयार पारिनु राम्रो होइन । त्यसले दुस्ख गरेको मान्छेको नैतिक भावनालाई हत्या गर्छ ।
सभापति देउवाबाट फेरि कांग्रेसको नेतृत्व कोइराला परिवारमा आउँछ कि आउँदैन होला ? के सोच्नुहुन्छ ?
यो कुरा त कोइराला परिवारमा भर पर्छ । कोइराला परिवारमा नेतृत्व क्षमता पनि देखिनुपर्‍यो । मलाई थाहा छैन, कोइराला परिवारभित्र पार्टीलाई हाँक्न सक्ने क्षमता छ कि छैन । अब शेरबहादुरजी आउनुभएको छ, शेरबहादुरजीसँग पनि डराउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । नराम्रा काम गर्नुभयो भने उहाँ आफैँ सिद्धिनु हुन्छ । तर, उहाँले बीपी र गिरिजाबाबुको लिगेसीलाई अगाडि बढाउन नसक्ने भन्ने छैन । उहाँ पनि जनताकै छोरा हो । मलाई विश्वास छ, उहाँ धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ । अब गल्ती गर्नुहुन्न । अनुभवले त हो मान्छेलाई पाको बनाउने
आलोचकहरूले के कुरामा तपाईंको आलोचना गर्छन् भन्ने थाहा छ कि छैन ?
मलाई धेरै साथीहरूले सुझाव दिँदा ‘आउट स्पोकन’ भयो, बढी बोल्न भएन भन्छन् । डिप्लोमेटिक हुनुपर्‍यो भन्छन् । मनमा कुरा केही राख्न नसक्दा धेरैको छुच्चो पनि बनिँदो रहेछ । तर, म के कुरामा विश्वस्त छु भने मैले कसैलाई हानि गरेकी छैन । म देखेको कुरा, लागेको कुरा बोल्छु । म कतैबाट प्रभावित विचार राख्दिनँ । जे बोल्छु, आफ्नै विवेकले बोल्छु । साभारः नेपाल
कुनौली– सखडा नयाँ सडकको उदघाटन